२६ बालबालिकामा कुपोषण
अमरगढी :डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकाका २६ बालबालिकामा कुपोषण देखिएको छ । नगरपालिको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार पाँच वर्षमुनिका दुई हजार चार बालबालिकामध्ये २६ मा शीघ्र कुपोषण देखिएको छ । यस्तै २३५ बालबालिकामा भने मध्य शीघ्र कुपोषण देखिएको नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख लोकराज पनेरुले जानकारी दिए।
सुत्केरीलाई घरमा पालेको गाईभैँसीको दूध दिँदा बच्चामा रोग लाग्ने तथा गाईभैंसीले पनि दूध दिन छाड्ने रूढीवादी परम्पराका कारण बालबालिकामा जन्मेदेखि नै कुपोषण हुने गरेको बताइएको छ । सुत्केरीले पोषणयुक्त खानेकुराअन्तर्गत दूध–दही नपाउने गरेका कारण बच्चामा कुपोषण देखिने गरेको उग्रतारा स्वास्थ्य चौकीका इञ्चार्ज अहेव केशवराज भट्टले बताए ।
'गाउँतिर त धेरै छ तर यहीँ नगरपालिकाभित्र समेत सुत्केरीलाई घरमा पालेको गाईभैँसीको दूध दिइन्न', सहश्रलिङ्ग स्वास्थ्य चौकी राईकी अनमी तुलसी भट्टले भने । आफूहरुले सुत्केरीलाई पोषणयुक्त खानेकुरा खुवाउन भनेर सम्झाई बुझाई गरी पठाउने गरे पनि उनीहरुले त्यसलाई लागू नगर्ने भूमिराज स्वास्थ्य चौकीकी अनमी शान्ति भट्टले बताए ।
सुत्केरीलाई पोषणयुक्त खानेकुराबाट वञ्चित गर्दा बालबालिकामा कुपोषण देखिने भएकाले सुत्केरी अवस्थामा झन् बढी पोषिलो खानेकुरा आवश्यक पर्ने अमरगढी स्वास्थ्य शाखाप्रमुख पनेरुले बताए ।
युरिक एसिड के हो ? र यसबाट कसरी बच्ने ?
लामखुट्टेबाट जोगिन झूल वितरण
अब चितवनमै कलेजाे प्रत्याराेपण
काठमाडौंमा विष्फोटमा परी ३ जनाको मृत्यु